सम्पादकीयः स्वास्थ्य सेवामा खेलबाड ? • Anumodan National Daily
स्वास्य सेवामा विकृति, बिसंगतिका कथाहरूबीच यतिवेला धनगढीमा अनुमति नै नलिएर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, पोलिक्लिनिक) चर्चामा रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिकाले “अनुमति बिना कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गराउन नपाउने” व्यवस्था गरेकोमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अनुमति नै नलिएर प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको स्थानमा निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा रहेका छन् । उदेकलाग्दो तथ्य के छ भने– सम्बन्धित निकायबाट थुप्रै पटक अनुगमन भएगरेका छन्, । नजिकै नियमनकारी निकाय रहेका छन्, तर स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेका गलत गतिविधिको समयमै रोकथामका ठोस पहल भएको पाइदैन । जनगुनासो बृद्धि भएपछि अथवा सञ्चार माध्यममा निरन्तर समाचार सम्प्रेषण भएपछि मात्रै सम्बद्ध निकायले चासो लिने गरेको अवस्था छ । सरकारी अस्पतालको निश्चित सिमाभित्र अर्को अस्पताल (निजी) खोल्न नपाइने ऐनको व्यवस्था पालना गर्ने, गराउनेतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन ।
आम नागरिकलाई सहज र सुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन राज्यको अहं दायित्व हो । त्यस्तै, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट नै स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सहज उपलब्धता सम्भव हुन्छ । तर, यसको अर्थ मौजुदा ऐननियमको व्यवस्थाको पालना नै नगरि मनपरि ढंगले निजी अस्पतालहरु खोल्न पाउनु पर्छ भन्ने कदापि हुदैन । त्यसै पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सेवा, सुविधामा जहिले पनि अन्तर हुने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा राम्रै सेवासुविधा सहित कार्यरत चिकित्सकहरुले आफू कार्यरत अस्पताल भन्दा पनि निजी क्लिनिकमा बढी ध्यान दिने गरेको तितो तथ्यका रुपमा रहेको छ । राज्यको निकै ठूलो धनराशी लगानी भएको तथा उपकरण तथा अन्य सुविधाका दृष्टिले राम्रो मानिएका तथा राज्यको लगानीमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका योग्य चिकित्सक कार्यरत रहेका सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य उपचार सेवाको अवस्था निजी क्षेत्रका अस्पतालभन्दा कमजोर देखिनु निश्चय नै बिडम्बना हो । त्यसैले जहिले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवाबारे आम सेवाग्राहीबाट गुनासो रहने गरेको छ ।
अर्कोतिर, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमीकमजोेरी सच्याउनका लागि ठोस पहल भएको पाइदैन । धनगढीमा सञ्चालन भएका निजी अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल, प्रयोगशालाको पटकपटक अनुगमन भएको छ । अनुमति नलिएर सञ्चालनमा रहेका, आवश्यक मापदण्ड पालना नगरेका स्वास्थ्य संस्थालाई सुधारका लागि निर्देशन दिइने गरे पनि पुनः ती स्वास्थ्य संस्थामा गल्ती दोहोरिने गरेको अवस्था छ । ऐन अनुसार सरकारी अस्पतालको निश्चित सिमाभित्र निजी अस्पताल खोल्न नपाउने प्रावधान भए पनि किन अहिलेसम्म त्यसको कडाईका साथ पालना गरिएन ? भन्ने सवाल यथावत छ । यसको सोझो अर्थ नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रुपमा नियमन गरिएको छैन भन्ने नै हो । त्यसैले अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका अथवा आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरेका निजी अस्पताल, क्लिनिक सहितका स्वास्थ्य संस्थाबारे तत्काल आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु जरुरी हुन्छ ।
अनुमति नलिएरै अस्पतालको सेवा शुरु
मुख्यमन्त्रीद्वारा हुलाकी सडक निरीक्षण
सम्पादकीय: मसिनो धानखेती विस्तार कार्यक्रममै सिमित नरहोस्
सम्पादकीयः प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बक्रदृष्टि ?